Konaklıyı imara açmak katliam olur | RayHaber | raillynews
[11 / 02 / 2020] TÜVASAŞသည်တင်သွင်းသောမီးရထားလမ်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်	54 Sakarya
[11 / 02 / 2020] Channel Istanbul EIA အပြုသဘောဆောင်သောအစီရင်ခံစာဖျက်သိမ်းခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[11 / 02 / 2020] အဘယ်ကြောင့်Haydarpaşaဘူတာရထားဘူတာအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသင့်သလဲ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး25 ErzurumKonakli ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
09 / 05 / 2014 25 Erzurum, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, TELPHER
Konakli ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပွင့်လင်းသတ်ပါလိမ့်မယ်: Hurriyet ခေါင်းစဉ်အတွက်ကပ္ပတိန် Naim Özkulလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အက္ခရာများကိုစလှေတျအဖြစ်ကိုယ်စားပြု, ထို့နောက်ဟောင်းတဦးအားကစားသမားများ၏အမျိုးသားရေးအသင်းတူရကီနှင်းလျောစီးအကိုင်းအခက်သတင်းကိုကြေညာ "သူတို့ကတကယ်တော့သေရောင်းချ" ။ Özkul letter "ဤစီမံကိန်းရပ်တန့်, ပွင့်လင်း Konakli အဆိုပါသတ်ဖြတ်မှု၏ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ဤလောကအတွက်တူရကီအလံဝှေ့ယမ်း skiers ပညာပေးချင်တယ်ဆိုရင်, Konakli ၏ဇုံဖွင့်ကြဘူးပါ။ Uludag, Kartalkaya, Erciyes, Palandökenမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှု။ သူတို့ကိုကြီးထွားပါစေ, လူငယ်များများအတွက်အစစ်အမှန်ပညာရေးနှင့်အတူဤလမ်းကြောင်း Leave "ဟုသူကရေးသားခဲ့သည်။
မတော်တဆမှုအတွက်သုံးစွဲ 2012 နှစ်ပေါင်းအမျိုးသား skier Aslı Nemutlu အဆိုပါပုဂ္ဂလိကပိုင်Konaklıစင်တာအတိုင်းအတာပေါ်တွင်အသေခံခြင်း, အားကစားအသိုင်းအဝိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်ပုန်ကန်၏။ အဆိုပါပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆင့်မြင့်ကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်, Erzurum Palandökenနှင်းလျှောစီးရေးစင်တာနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်နယ်ပယ်Konaklıစင်တာကိုယူခဲ့သညျ။ အမှန်တကယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ (အသိပညာ) အကြောင်းကိုအလယ်ပိုင်းဒေတာနှစ်ဦးစလုံး၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂလိကပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (OIB) ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပေးထားခဲ့သည်။
က Hurriyet တူရကီ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ယခင်အမျိုးသားအသင်းကပ္ပတိန်အကိုင်းအခက်အားကစားသမား Naim Özkulဂုဏ်အသရေ, "minced အသား Konakli နှင်းလျောစီး, သတင်းကြေညာခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ခေါင်းစဉ်အတွက်" သူတို့ကရောင်းချတကယ်တော့သေ "။ ကျွန်တော်မှစာတစ်စောင်ကိုစလှေတျ "ဟု, ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုရပ်တန့်။
Palandökenအတွက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်၏ပြဿနာများအဓိကအားကြောင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားÖzkulစာ၌တည်၏။ အခမဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သူအားကစားသမားများနှင့်နည်းပြများအတွက်Palandökenနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်အပေါငျးတို့သ LIFT သုံးစွဲဖို့ "ဒီလက်ျာဘက်။ Uludag, Kartalkaya လေ့ကျင့်ရေး၌သငျအားကစားသမားယေဘုယျအားဖြင့်နှင့် ပတ်သက်. ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများသားဖြစ်ကြ၏သူတို့ကိုယ်သူတို့မြှုပ်နှံသောနေ့စဉ်အခြေခံလေယာဉ်ပြေးလမ်းဝင်ငွေပေါ်တွင်ငှားရမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသိပ်အားကစားသမားများအတွက်အရေးပါသောအခွင့်ထူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားဧည့်ရည်ရွယ်ချက်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားအတူတူပင်တည်နေရာအသုံးပြုမတော်တဆမှုထံသို့လာဘို့အပြင်, ကဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့Palandökenအတွက်ဒီနှစ်တစ်ဦးမသင့်လျော်အံ့သြစရာကြုံတွေ့ရ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏မိတ်ဆွေများထံမှသင်ယူကြပြီ Erzurum; ဒါပေမယ့်လက်ျာအသုံးပြုသူ၏လက်၌ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲတူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်ရာမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ သိ. အဘယ်သူကိုမျှမပါဘဲမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအဆောက်အဦ, - တဦးတည်းညဉ့်အခါစိတ်ကြိုက်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များသာလက်တစ်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူတဦးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလာတနေ့ Andorra'l ကိုသိ, ဒီမရှိတော့ငါတို့ဥစ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသိမ်းယူဂိုဒေါင်ကလပ်ကိုတောင်ငွေညှစ်ကိုခေါ်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ် ... "
"1 15 SEASON အပူဒီဂရီကို DAYS ကိုအတိုကောက်"
Konakli, Erzurum အတွက် 2011 နှစ်ပေါင်းအမှန်တကယ်ကမ္ဘာ့ဖလားတက္ကသိုလ်ဆင်တူဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲÖzkulဘို့သူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့အတွက်လူငယ်များရဲ့အဖြစ်မှန်အသိကျိန်ဤအားကစားဖွင့်လှစ်, ဤအရပ်ဌာနကိုသူတို့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လုပ်ပေးတစ်ခုတည်းသောနေရာအရပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းစကားလုံးများကိုဆက်လက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်တာရှည်အပူရာသီကြောင့်အလယ်ဗဟိုတွင်အသိုက်နှင့်အတူဟိုတယ်:
"သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောပြဿနာ Konakli ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသတ်ဖြတ်တည်ဆောက်မယ့်နှင်းလျှောစီးဟိုတယ်နှင့် chalets ဖြစ်လာသည်။ နှစ်ပေါင်းဆွစ်ဇာလန်သြစတြီးယားနဲ့တူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဖြစ်ပြိုင်ပွဲကဒီမှာန်းကျင်တောင်တို့အတွက်ခရီးသွားဧည့်စခန်းချနေထိုင်မည့်ခရီးစဉ်မှနှစ်ဦးစလုံးသည် သွား. အဘယ်အရပ်နိုင်ငံများရှိ ... ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များရှိပါတယ်။ Courchevel, Meribel နီးပါးဖက်ရှင်နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်ဟိုတယ်များအဖြစ်၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာစျေးနှုန်းအချိန်ဖြုန်းဖို့စျေးကြီးတဲ့, ဇိမ်ခံဟိုတယ်နှင့် Michelin-ကြယ်ပွင့်စားသောက်ဆိုင်တွေကပိုပြီးပျော်စရာများနှင့်အားလပ်ရက်ရည်ရွယ်ချက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ရှိသည်သွားရဲ့ ...
အိမ်သာထဲမှာစားသောက်ဆိုင်နှင့်နှင်းလျှောစီးစရာမလိုဘဲအခြားအဆောက်အဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဒေါင်လိုက်အဆိုပါ 1000 ၏ဗဟိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမီတာမှီ, မြို့သို့မဟုတ်မြို့မှာနေဖို့။ သငျသညျ FINUK မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်-ကောင်းကင်ကြိုး cable ကိုကားတစ်စီးသည်လျှင်။ ဤနေရာတွင်ရာသီရှည်ကြာကအဆောက်အဦး၏အပူချိန်ကိုတောင်ပေါ်ကဆင်းလမ်းကြောင်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ပြည်သူများကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ ပူနွေးလာမှု, ရာသီရဲ့အစောပိုင်းပိတ်သိမ်းများထဲမှဒီဂရီသောကြောင့်, က 15 ရက်ပေါင်းဆိုလိုသည်။ ပြည်သူ့နေရောင် loungers အပေါ်ဘီယာ sunbathing နှင့်ရင်း တင်. ဤစင်တာများပိုနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကခြားနားချက်ဘာသိ? အဆိုပါအားကစားသမားနှင်းလျှောစီးချန်ပီယံ၏ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွား။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လမ်းကြောင်းအဘို့ထိုသူတို့မှခွဲဝေခံရဖို့ထိုဒေသတွင်အများဆုံးလေးနက်အားကစားသမားများနှင့်ကလပ်အသင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းစင်တာများဤအမျိုးအစားကြိုက်တတ်တဲ့။ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လူငယ်များမခရီးသွားဧည့်ဖျော်ဖြေရေးလေးနက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာယခုဖြစ်ပါတယ်။ level မြင့်တက်။ ထိုအဖြစ်ကောင်းဒီလမ်းအတွက်,2လူဦးရေသန်းကျွန်တော် 75 အားကစားသမားများထက်ပိုပြီးပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဆုံးအနည်းဆုံးနေသော်လည်းအဆိုပါ Sochi အိုလံပစ်အားကစားသမား၏ 706လူဦးရေသန်းပေးပို့သူဆလိုဗေးနီး te ဖြစ်ပါတယ်။ (ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကြားတိုင်းပြည်ရဲ့ခွဲတမ်းပေါ်တက်ရောက်ရန်တတ်နိုင်သောကွောငျ့ဤအ6ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး)
နှင်းလျှောစီးစင်တာများဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အတားအဆီးမရှိသေးပါနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးများအကျိုးအတွက်အဆိုပါယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့နှင်းလျှောစီး Nemutlu ကျွန်တော်တို့ကိုဖကျြဆီးခံရလျှင်ဤအားကစား, ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုများအလံတငျမွှောကျဖို့မကြိုးပမ်းရွှေ့ဖို့ ... ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့၏အကြီးမြတ်ဆုံးတဦး၏စာဖတ်သူများကိုလည်းငါတို့သည်ဤအမှု၌အနာဂတျအတှကျကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်အခါသမယရှိနေသည်ထင်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးရှိ ...
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုရထားမတော်တဆ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) အဖြစ်
ထိုကဲ့သို့သော Kadikoy5အတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုသေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) အဖြစ် Metrobus မတော်တဆမှု
Elaziğအသတ်ခံရမှုရထားမတော်တဆ,7သေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) အဖြစ်
3 ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရန်ဖွင့်လှစ်လေဆိပ်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများ
ဂျော့ဘ်: Palandökenနှင့် Konakli နှင်းလျှောစီး Center ကစက်မှုလျှပ်စစ် Technician အယ်ယူရန်ခဲ
Erzurum Konaklıနှင်းလျှောစီး Center ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
အမြင့်ဆုံးဆီးနှင်းအနက် Erzurum Konakli
တိုးတက်မှုအတွက် Konakli တူရကီရဲ့အကြီးမားဆုံးအီဂလိုရေခဲအိမ်
တောင်တက်Konaklıနှင်းလျှောစီးစင်တာတပ် ချ. စတင်
Palandökenနှင့် Konakli နှင်းလျှောစီး Center ကပုဂ္ဂလိက
Konaklı Center ကစိုက်ပျိုးကြသည်
အမျိုးသား skier Aslı Nemutlu
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်မဟုတ် Metro အသားအသုံးချမှကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုလိုက်ပါတယ်
Elven ဝန်ကြီးများ: TEM ကားလမ်း '' ဎ 20 မေလထိုအခါမှသာယာဉ်အသွားအလာစတင်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အီဂျစ်, ဘတ်စ်၏ဖေဖော်ဝါရီလ 12 1851 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Salcano Sakarya စက်ဘီးစီးအဖွဲ့သည်မုန်တိုင်းကဲ့သို့ရာသီသစ်သို့ဝင်ရောက်သည်
Channel Istanbul EIA အပြုသဘောဆောင်သောအစီရင်ခံစာဖျက်သိမ်းခဲ့သည်